Tora 21 makosi ekutora mifananidzo pamutengo weimwe | IPhone nhau
Iyo Bundle Co inotipa 21 kosi yekuve nyanzvi yekutora mifananidzo ye $ 98,50 chete
Ignacio Sala | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Mumakore mashanu apfuura, takaona kuti vashandisi vangani vakasiya komputa kamera yavaiwanzoshandisa kutaura nezvenguva yavo yakanakisa kana zviitiko zvakakosha mudhirowa yekushandisa iyo iPhone kana kamera inodzikamisa zvakanaka. Iwo makamera enhare mbozha afambira mberi nenzira isingatendeseke uye nhasi ivo vanopa yakakwira mhando uye mikana pane compact kamera.
Asi kana tichinyatsofarira kutora mifananidzo, ine SLR kamera tinogona kuburitsa zvakanakisa matiri nekutenda kune kwakawanda kwazvinotipa. Uku kuita kwakawanda kunogona kuwanikwa mune mamwe mashandisirwo eedu smartphone, asi iwo haana kunyatso nzwisisika. Kana isu tichida kuziva zvakavanzika zvekutora mifananidzo, dzidza hunyengeri uye nekuvandudza zvatakatora, zvakanakisa zvatingaite kosi yekutora mifananidzo.
1 Hazvisi nyore kutora mifananidzo
2 Maitiro ekuvandudza maitiro edu
3 Dzidzo idzi dzinodhura zvakadii?
Hazvisi nyore kutora mifananidzo
Chokwadi vazhinji venyu kana muchienda parwendo, kuenda kumabiko emhuri kana kungoda kutora mifananidzo yevana vako vadiki, iwe unotora yakawanda nhamba yekutora asi mazhinji acho, kana asiri iwo mazhinji, haudi Chaizvoizvo. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekuumbwa. Kuumbwa mukutora mifananidzo kunomiririra 90% yacho. Kana kurongeka kwacho kwakaipa, mufananidzo wacho hauna kunaka. Neraki, kana resolution yemufananidzo iri yakakwira, tinogona chirime kuti uwane kurongedza kuri nani uye nekuvandudza zvakanyanya mhedzisiro.
Asi pamusoro pezvo, isu tinofanirwa zvakare kufunga nezve zvimwe zvinhu zvakaita sekuvhara kwe lens, kumhanya kwevhavha, kunzwisisika kunoshandiswa ... Hazvina kufanana kutora mifananidzo mumba pane yekunze. Kutora mifananidzo yezvinhu hazvina kufanana nekutora mifananidzo yevanhu. Izvo zvakakosha kuti uzive kukwana kwemakamera uye nemikana ye Photoshop kuziva panguva yakapihwa, kana iko kubatwa, tinogona kugadzirisa kana kuigadzirisa gare gare.
Unogona tenga bundle ine 21 kosi yekutora mifananidzo nemutengo weumwe mu link watichangobva kukusiya
Pane zvakawanda zvinhu zvatinofanira kufunga nezvazvo mumifananidzo. Kunyange chiri chokwadi icho mazhinji SLR makamera anotipa otomatiki modhi, modhi inoshandiswa nekushomeka mune ese mafoni, haina kufanana nekutamba nekutamba, nguva yekuburitsa shutter, kunzwisisika, kudzika kwemunda….
Mufananidzo ane ruzivo anogona kutora mifananidzo iri nani aine 300 euro kamera kupfuura isu nekwanisi ne6000 euro kamera kana isu tisina ruzivo rwakakosha. Kana iwe wakagara uchifarira kutora mifananidzo asi usati wambotya kutora kosi yekunyatso kudzidza maitiro ekuvandudza, saka tinokuratidza chakanakisa kupihwa kwe makosi ekuve akanaka mifananidzo.
Maitiro ekuvandudza maitiro edu
Iyo Bundle Co inotipa akateedzana emakosi epamhepo ku uve nyanzvi yekutora mifananidzo zvakanaka kubva kumba kwedu. Makosi ekutora mifananidzo, kazhinji, anowanzo dhura, asi nekuda kwekusimudzirwa kwavanotipa mukati memazuva maviri anotevera, tinogona kuchengetedza mari yakawanda, nekuti mazhinji acho anotipa zvidzikisira izvo dzimwe nguva zvinosvika 97%, ngatiende izvo ivo vanotozvipa kwatiri.
Aya makosi, havangotidzidzise chete izvo zvekutanga kuitira kuti tivandudze mashandiro edu kana tichitora mifananidzo, asi zvakare, vanotipawo makosi akasarudzika ekugona kugadzirisa kana kutarisa nzira yedu mumunda. Aya makosi anotibvumidza isu kuva nyanzvi yekutora mifananidzo yemichato, vacheche, vakadzi vane nhumbu, vateveri vechikafu, mafambiro, nziyo, zvigadzirwa ...
Uyewo, hatidi kuva nekamera inoyeuchidza Kugona kuita makosi aya, nekuti nehunyanzvi hushoma uye neruzivo rwatinotipihwa neaya makosi, tinogona kuve nyanzvi dzekutora mifananidzo chechero chidzidzo chinouya mundangariro.
Izvo chete asi izvo zvatinowana nemakosi aya ndizvozvo anongowanikwa muChirungu. Nekudaro, kana tikatarisa kuti mutauro wekutora mifananidzo, kutaura nezve mazwi, chiRungu, kunzwisisa ruzivo rwese rwavanoisa patiri hakunetsi. Aya makosi akanyorwa muChirungu chakareruka, pasina mazwi asinganzwisisike kana hunyanzvi, kupfuura iwo atinogona kutoziva nekugara tichitora mifananidzo nguva dzose.
Dzidzo idzi dzinodhura zvakadii?
Usati wataura nezve mutengo wemakosi aya, zvirokwazvo iwe unofarira kuziva kuti ndiani ari kumashure kwavo. Rebecca Yale, Julie Paisley, Jen Huang nevamwe vevateereri vemifananidzo iyi. Vafotori ava Ivo vanotaurwa muongororo dzakadai saMartha Stewart Weddings, Style Me Pretty… Mamwe emagazini akakosha kwazvo muchikamu chemafashoni, masitaera uye kushongedza.
Iyo pasuru iyo iyo iyo Bundle Co inotipa isu inotengwa zvakasiyana pa $ 4.016,99, mutengo uyo pasina mumwe wenyu ari kuda kubhadhara. Asi kana isu tikawana iwo makosi makumi maviri nerimwe ari chikamu cheiyi paki, nekuda kwekusimudzira kwakapihwa mumazuva maviri anotevera, tinogona kusevha 21 euros, tiri mutengo wekupedzisira we $ 98,50, mutengo watinogona kuwana chete yeaya makosi.
Wakazvida here? Unogona tenga iyo yekutora mifananidzo kiyi pane iyi link uye tanga kuvandudza mhando yemifananidzo yako ipapo.
Mazhinji emakosi atinogona dhawunirodha ivo zvakananga kune yedu iPhone kana iPad, kunyangwe isu tichigona zvakare kuwana zvimwe zvatinofanira kuita online. Muzviitiko zvese izvi, hazvidi kuti isu tisagare pamberi pekombuta kuti tikwanise kuita makosi, ayo anowedzera kuwedzera kwekusiyana-siyana uye nyaradzo kana zvasvika pakuzviita patinoenda kana kudzoka kubva kubasa, kana isu tinobuda kunofamba imbwa, kana isu tichienda parwendo nemotokari kana neruzhinji rwekutakura ...
Mamwe emakosi atinawo kuburikidza nebundu iri ndeaya:
Yekutanga kosi yekutora mifananidzo.
Mufananidzo neiyo iPhone.
Mifananidzo yevana vachangozvarwa
Kutora mifananidzo neGoPro
Mifananidzo yekuumbwa kosi.
Bhizinesi kutora mifananidzo
Kana iwe uchifunga kuti nguva yasvika yekutora rimwe danho mukutora mifananidzo, nekuda kweaya makosi iwe uchaona sei iwe unodzidza zvinhu zvisina kumbobvira zvayambuka pfungwa dzako uye kuti mune dzakawanda nguva dzakakosha kuita chero mhando yekubata. Zvipo zvakaita seizvi zvakanetsa kuwana, saka kana chikamu chako cheChirungu chiri pakati, uye uchida kutora mifananidzo, usafunge kaviri kana kuti uchazvidemba.
Kana iwe usati uchinyatso kujekesa, tarisa paInternet nemutengo weimwe chete kosi yekutora mifananidzo, imwe chete, zvirokwazvo inodhura kupfuura iyo $ 98,50 yeiyi 21-kosi package. Kuti uzive zvimwe zvakawanda uye utenge iyi package yemaphoto ekutora mifananidzo, unogona zviite kuburikidza neiyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Iyo Bundle Co inotipa 21 kosi yekuve nyanzvi yekutora mifananidzo ye $ 98,50 chete
Iyo nyowani AirPods 2 inogona kusvika muchirimo yakaitwa nhema uye isiri-inotsvedza zvinhu
Mimwe yemitambo yeMitambo yeOlympic ichagadzirwa nePhones dzekare